WARBIXIN XASAASI AH:BAARLAMAANKA SOOMAALIYA MUXUU KA YEELAYAA ARIMAHA KHILAAFKA KHALIIJKA CARABTA. -
HomeArimaha bulshadaWARBIXIN XASAASI AH:BAARLAMAANKA SOOMAALIYA MUXUU KA YEELAYAA ARIMAHA KHILAAFKA KHALIIJKA CARABTA.
WARBIXIN XASAASI AH:BAARLAMAANKA SOOMAALIYA MUXUU KA YEELAYAA ARIMAHA KHILAAFKA KHALIIJKA CARABTA.
Asbuucii ama todobaadkii naga dhamaaday waxaa furmay kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya iyada oo khilaafkii Khaliijkana uu galay Asbuucii 6-aad iyo saameynta ka dhaxeysa ayaan warbixintan kooban ku eegeynaa;
A. Waxaa muuqata in dawlada Qadar ka guuleysatay go’doomintii walaalaheed galsheen 6 todobaad ka hor, kadib markii ay waayeen cadeyn qodobadii ay ku eedeeyeen, ayna soo fara-gelisay dawlada Mareykanka oo cadeysay in ay ku qanacsantahay sida Qadar ugu heelan-tahay la-dagaalanka Argagaxisada, ugana horeyso dawladaha qaar ku eedeeyey taageero Argagaxiso, lana saxiixatay heshiis ah iskaashi la-dagaalanka Argagaxisada.
B. Dawlada Soomaaliya oo qaadatay ugu horeyntii go’aan dhex-dhexaad ah ama u janjeera taageerada Qadar, ayaa xiligaas Baarlamaanku ku jiray fasax ayna ku maqnaayeen intooda badan dibadaha dalka iyo Cumrada Ramadaanka, markii ay soo noqdeen ee uu furmay kalfadhiga 2-aad, waxaa soo baxay COD ama GUCASHO ah in dib loogu laabto go’aankii dawladda! Waxaana horseed ka ah; Ganacsato, Madax-gobaleedyo, Siyaasiyiin gacan-saar la leh dawladaha Imaaraatka iyo Sacuudiga iyo xubna ka tirsan labada Aqal.
Hadaba maxaa dhici kara hadii culeys lagu saaro dawlada in ay ka laabato go’aankeeda ama laba-laba geliso;
1. Dawladaha Imaaraatka iyo Sacuudi waxey bilaabayaan in ay Soomaaliya ku ciqaabaan go’aankeeda, dhanka siyaasada iyo dhaqaalaha, ka hor go’aankaana waxey ku ciqaabi-jireen deegaanka ay Gobalka ka degantahay oo marna muhiim u ah marna khatar ku ah sida ay u arkaan iyo Dimoqoraadiyada iyo isbedelka xukunka ka jira Soomaaliya oo isna khatar ku ah aragtidooda, sidii ay ula dagaalameen wadamadii kacdoonka Carabta oo kale, iyada oo la ogyahay in wadamada Carabta ee 22 ka ah isbedel Siyaasadeed iyo Xukun uu ka jiro kaliya 2 dal oo kala ah; Soomaaliya iyo Tuunis taas oo welwel ku haysa Carabta gaar ahaan Khaliijka.
2. In haybadda, karaamada iyo sumcadda dawlada Soomaaliya hoos u dhacdo hadii ay ka laabato go’aankeeda, wax tixgelin iyo dhaqaale ahna aan looga bedelan.
3. In la iska hor-keeno la-iskuna diro Madaxda, Siyaasiyiinta iyo Hay’daha dawlada, ayna sahlanaato qeybi oo xukun, sidii ku dhacday; Yemen, Liibiya, Masar, Suuriya, Sudan iwn.
4. In uu ka faa’iidaysto mucaaradka dawlada oo ay ku dhuuntaan cid kasta oo kasoo horjeeda Xukuumada ama Madaxweynaha iyada oo qiil ka dhiganeysa in ay difaaceyso danaha Soomaaliya ee Imaaraadka iyo Sacuudiga.
5. In ay naga go’do ama yaraato taageerada dalalka Qadar iyo Turkey, bedel-koodana aan laga helin wadamada Imaaraatka iyo Sacuudiga (miro geed-saaran, kuwo la hayo laguma bedelo ama looma daadsho).
6. Dawladaha deriska ee Itoobiya iyo Kenya oo xiriir sokeeye la leh Imaaraatka iyo Sacuudiga lagana yaabo in ay ka midoobaan Ajandaha Siyaasada Soomaaliya iyo Badeeda, Hawadeeda iyo Gobaladeeda kala qeybsan hadaba, mana filayno in ay dan noo tahay.
7. Weli makala cadda halka ay reer galbeedku raaci-doonaan labada saf, iyo waqtiga ay qaadan-doonto dhibaatadu.
8. Dawlada iyo hay’ada-heeda oo laga mashquuliyo arimaheeda gudaha iyo ka tashiga masiirkeeda sida; Dastuurkeeda, Xisbiyadeeda, Doorashadeeda Sannadka 2020-ka iyo Xasilinta Dalkeeda, kuna mashquusha khilaafka Khaliijka iyo kala taageeridooda.
9. Waxa nooga lumi kara go’aan ka laabashada oo laga yaabo go’aan ku adkeysiga iyo calool-xirashada, sida matalkii ahaa; (wax noo roon laakiin Caruurteena iyo taariikhdeena u daran miyaan sameynaa mise Caksigeeda)?.
10. Siyaasada iyo Siyaasiyiinta Soomaaliya oo aan xasilin isna raacin oo mar kasta kala raaca Siyaasadaha dawladaha; Deriska, Khaliijka, reer Galbeedka iyo reer Bariga iyo Siyaasada dalka oo aan waligeed degin.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ka dhalan kara hadii laga laabto ama laba-laba la geliyo ama culeys lagu saaro dawlada Soomaaliyeed in ay ka laabato go’aankii ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka tani waa ARAGTIDEYDA!!!
Aragtidiina iyo go’aanka Barlamaanka ee maslada iyo masiirka dalka waa muhiim!!!.